Tobannaan dad ah oo ku sumoobay degmada Mahadaay – Radio Muqdisho
Tobannaan dad ah oo ku sumoobay degmada Mahadaay
Degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa la sheegay in ku dhawaad 50 qofood ay ku sumoobeen raashin ay ka cuneen meel Alla-bari ah.
Guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Mahadaay Xaaji Saalax Fuleen ayaa Radio Muqdisho u sheegay in 47 qofood oo ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda Oktoobar ee degmada Mahadaay la dhigay isbitaalka guud ee degmadaasi kaddib markii ay ku sumoobeen raashin ay ka cuneen meel Alla-bari ah.
Wuxuu tilmaamay in dadkaasi lagu arkay shuban iyo matag joogta ah, waxaana la geeyay ayuu yiri Isbitaalka guud ee degmadaasi, isagoo xaqiijiyay ineysan jirin qof u dhimatay ilaa iyo hadda.
Dhinaca kale guddoomiyaha ayaa ka deyriyay xaaladda cisbitaalka degmada Mahadaay oo uu tilmaamay ineysan Dawo, isagoo walaac ka muujiyay halka ay dawo ka helayaan xaaladda dadkan.
Xaaji Saalax ayaa dalbaday in gurmad deg deg ah lala soo gaaro dadkan maadaama cisbitaalka degmada aysan oolin wax dawo ah.
Duqeeyn qasaare geysatay oo kooxda UGUS lagula beegsaday Galgaduud